शुक्रबार मलेसिया, कतार, दुबई, साउदीसहित सबै देशको पैसाको भाउ बढ्यो (सुचिसहित) – जलजला अनलाइन
Posted on February 22, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on शुक्रबार मलेसिया, कतार, दुबई, साउदीसहित सबै देशको पैसाको भाउ बढ्यो (सुचिसहित)
फागुन १०, काठमाण्डौ । रियाल, रिगिंट, दिर्हाम, दिनार लगायत आज सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । तर कोरियन वनको मूल्य भने घटबढ भएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार लागि अमेरिकी डलर १ को खरिददर ११३ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ३१ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ११३ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ०८ पैसा तोकेको थियो ।
यस्तै साउदी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४८ पैसा छ । बिहीबार खरिददर ३० रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४२ पैसा थियो ।
शुक्रबार कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३९ पैसा तोकिएको छ । अघिल्लो दिन खरिददर ३१ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको थियो ।
आज यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १२ पैसा छ । बिहीबार खरिददर ३० रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ०६ पैसा थियो ।
मलेसियन रिंगिट १ को खरिददर २७ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ ०३ पैसा छ । हिजो बिहीबार खरिददर २७ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ ०५ पैसा थियो ।
यस्तै शुक्रबार कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७४ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ३७६ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ । हिजो खरिददर ३७३ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपैयाँ ७१ पैसा थियो ।
आज बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३०३ रुपैयाँ २० पैसा छ । हिजो बिहीबार खरिददर ३०१ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर ३०२ रुपैयाँ ६१ पैसा थियो ।
शुक्रबार कोरियन वनको मूल्य घटबढ भएको छैन । बिहीबार जस्तै आज शुक्रबार पनि एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ ।
हवाइ भाडा घट्यो, कहाँ जान कति लाग्छ ? (भाडादरसहित)
Posted on January 11, 2019 Author Jaljala Online
पुस २७, काठमाडौं । आन्तरिक उडानतर्फको हवाइ भाडा घटेको छ । नेपाल आयल निगमले आन्तरिक हवाइ इन्धनको मूल्य घटाएसँगै वायुसेवा सञ्चालक संघले हवाइ भाडा घटाएको हो । आयल निगमले शुक्रबार आन्तरिक वायुसेवाले प्रयोग गर्ने हवाइ इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ घटाएको थियो । यसअघि निगमले १ सय ४ रुपैयाँ ५० पैसा लिटरमा आन्तरिक वायुसेवालाई […]
रोल्पाको शहीदमार्ग सडकः किन भयो चार वर्षमा १२ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे ?
Posted on March 25, 2018 Author Jaljala Online
चैत ११, रोल्पा । शहिदमार्ग सडक अन्तरगत दाङको घोराही देखि रोल्पाको होलेरीसम्मको सडक खण्ड कालो पत्रे गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती भएको स्थानीयले गुनसो गरेका छन् । करिव ३२ किलोमिटर सडक खण्ड कालो पत्रे गर्न काम सुरु गरेको ४ वर्ष हुन लाग्दापनि अहिले सम्म सम्पन्न भएको छैन । एक्जीम बैंक अफ इन्डियाको सहयोगमा शहिदमार्गको करिव ३२ किलोमिटर सडक […]
Posted on May 16, 2018 May 16, 2018 Author Jaljala Online
जेठ २, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर दुई/दुई रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको आयल निगमले जनाएको छ । मूल्यवृद्धिपछि पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलको भाउ ९२ रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको […]
‘अब प्रदेश ५ को राजधानी यस्तो ठाउँमा तोकिने भयो’
राजधानीको व्यस्त सहरमै कसले पड्कायो शक्तिशाली बम ? प्रहरी यसो भन्छ